February 4, 2020 - CeleLove
သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဒီအချက်တွေဖြစ်နေရင် ဆရာဝန်ချက်ချင်းပြဖို့လိုနေပါပြီ…
February 4, 2020 CeleLove 0
သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဒီအချက်တွေဖြစ်နေရင် ဆရာဝန်ချက်ချင်းပြဖို့လိုနေပါပြီ… ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းမှာ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုခုရှိနေရင် ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပမှာလည်း အပြောင်းအလဲလေးတွေ သိသိသာသာရော၊ မသိမသာရော ဖြစ်လာပါတယ်။ တချို့အချက်လေးတွေက သိပ်ပြီးစိုးရိမ်စရာမဟုတ်ပေမယ့် တချို့ကျတော့လည်း ရောဂါကြီးတွေဖြစ်ဖို့ အစပျိုးနေတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပမှာ သာမန်မဟုတ်တဲ့ အပြောင်းအလဲတစ်ခုခုဖြစ်လာပြီဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းထဲမှာ တစ်ခုခုချို့ယွင်းနေပြီဆိုတာ သိရမှာပါ။ ဒါကြောင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပမှာ ဒီလိုအချက်တွေဖြစ်လာရင် […]
ညဘက် အိပ်ရေးပျက်ခံတာကြာရင် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ဆိုးကျိူးများ…
ညဘက် အိပ်ရေးပျက်ခံတာကြာရင် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ဆိုးကျိူးများ… ညဘက်ကျရင် မျက်စိမှိတ်မယ့်အစား ဘယ်တော့မိုးလင်းမှာလဲလို့ နာရီပဲထကြည့်နေရတာမျိုး ကြုံဖူးကြလား။ ဒါမှမဟုတ် တခုခုလုပ်နေလို့ မအိပ်ဖြစ်တာဆိုလည်း ရလဒ်ကတူတူပဲလေ။ အိပ်မပျော်တာဖြစ်ဖြစ်၊ မအိပ်လိုက်ရတာဖြစ်ဖြစ်၊ အိပ်ပျော်လိုက်နိုးလိုက် သံသရာလည်နေတဲ့သူဖြစ်ဖြစ် နောက်ဆုံးခန္ဓာကိုယ်မှာ ဖြစ်လာမယ့် အကျိုးဆက်ကတော့ သိပ်မကွာကြပါဘူး …။ ညအိပ်မပျော်တဲ့ရက်တွေ များနေတဲ့သူတွေမှာ နှလုံးကျန်းမာရေးကို […]
သွေးအမျိုးအစားတွေအလိုက် အချစ်အပေါ် သဘောထားများ…
သွေးအမျိုးအစားတွေအလိုက် အချစ်အပေါ် သဘောထားများ… သွေးအမျိုးအစားတွေကလည်း လူတစ်ယောက်ကို အများကြီးသက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်။ သွေးအမျိုးအစားအလိုက် စိတ်နေစိတ်ထား၊ ခံယူချက်၊ ခံစားချက်တွေ ကွဲပြားနေပြီး လူတစ်ယောက်ရဲ့ အကြောင်းကို သွေးအမျိုးအစားကနေတစ်ဆင့်လည်း ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ သွေးအမျိုးအစားအလိုက် အချစ်အပေါ် သဘောထားနဲ့ ခံယူချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင်ရော ဘယ်သွေးအမျိုးအစားလဲ၊ မှန်ရဲ့လား ကြည့်လိုက်ပါအုံး […]
သင့်ကို ၀န်မခံပေမယ့် မိန်းကလေးအများစု သဘောကျတတ်တဲ့ အချက်များ . . .
သင့်ကို ၀န်မခံပေမယ့် မိန်းကလေးအများစု သဘောကျတတ်တဲ့ အချက်များ . . . (၁) ကိုယ့်ကို ငေးကြည့်ခံရတဲ့အခါ မိန်းကလေးတော်တော်များများမှာ ကိုယ့်ကိုငေးမောကြည့်ခံရတာကို မကြိုက်သူ တော်တော်ရှားပါတယ်။ဥပမာ – သင်ဟာချစ်သူနဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ လှလှလေးဝတ်ပြီး မိတ်ကပ်လှလှလေး ပြင်လာတယ် ဆိုပါတော့။ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ လျှောက်လာတဲ့သင့်ကို ပုရိသတွေ လည်ပြန်ကြည့်တာကို […]
ဒီသမိုင်းလေးကို သိပြီးသကာလ “နောင်အခါ ကျွန်တော် ခါငှက်သား မစားတော့ပါ”
ဒီသမိုင်းလေးကို သိပြီးသကာလ “နောင်အခါ ကျွန်တော် ခါငှက်သား မစားတော့ပါ” ပြောင်ခေါင်းဒေသရဲ့ တောတောင်ထဲ ရောက်ချိန် မှာ ငှက်မုဆိုးတစ်ယောက်က လာရောင်းတာ.. တစ်ကောင်ကို ၃၀၀၀ – ကျပ်နဲ့ ခါငှက် ၂ ကောင်။ ၂ ကောင်ဆိုတော့ ၆၀၀၀ – ကျပ်ပေါ့။ ဝယ်မိတာ […]
လူဆယ်ယောက်ကိုဖြန့်ဝေပေးပါက လူတယောက်၏ အသက်ကို ကယ်နိုင်ကောင်းတယ် လို့ဆိုပါတယ် ကျမ လုပ်ရမယ့် အပိုင်းကိုတော့ ကျမလုပ်ပြီးပြီ …။ သင့်အပိုင်းက်ို သင်လုပ်ဖို့ပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် …။ သံပယိုရည်နဲ့ ရေနွေးကို သောက်သုံးခြင်းဖြင့် ကင်ဆာကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ် …။ သကြားကို မထည့်ပါနဲ့။ ပူနေတဲ့သံပယိုရေနွေးဟာ အေးနေတဲ့ […]
ဒီအချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီနေပြီဆိုရင် သင်ဟာဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါ
ဒီအချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီနေပြီဆိုရင် သင်ဟာဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါ မိန်းကလေးတစ်ယောက် လှတာနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတာဟာ မတူညီပါဘူး။ မိန်းကလေးတစ်ယောက် လှတယ်ဆိုတာက ရုပ်ကလေးလှရုံ အပေါ်ယံမျှသာဖြစ်ပြီးသော ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ဆိုတာကတော့ သူမရဲ့အပြုအမူတိုင်းကို ငေးကြည့်နေချင်တတ်တာ၊ သူမပြောလိုက်တဲ့ စကားတိုင်းက စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေတတ်တာ၊ သူမရဲ့ စိတ်ထားလေးက ချစ်စရာကောင်းနေတတ်တာ စသဖြင့်ပေါ့ သူမလှုပ်ရှားပြုမူသမျှဟာ တစ်ဖက်လူရဲ့ […]
ကားစီးလျှင် မူးဝေတက်သူများအတွက် သိထားသင့်သည့် နည်းလမ်းများ
ကားစီးလျှင် မူးဝေတက်သူများအတွက် သိထားသင့်သည့် နည်းလမ်းများ ကားမူးခြင်းက လူတော်တော်များများ ကြုံလေ့ရှိသော ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကားမူးသော အကြောင်းရင်းက မျက်လုံးနှင့် အတွင်းနားတို့ ဟန်ချက်မညီမျှမှုကြောင့် ဖြစ်ပါတယ် …။ အတွင်းနားက ခန္ဓာကိုယ်ကရွေ့လျားနေသည်ဟု ဦးနှောက်ကို သတင်းပို့ပေးပါတယ်။ ကားစီးသည့်အခါ မူးဝေအော့အန်တတ်သောသူများက ကားမူးခြင်းကို သက်သာစေမည့် နည်းလမ်းများနှင့် ကားမူးခြင်းမဖြစ်အောင် […]
သင့်ကို ဆွဲစားဖို့ သက်သက်သာလာတွဲနေ့တဲ့ ဘဲတွေရဲ့ လက္ခဏာ (၅) ချက်
သင့်ကို ဆွဲစားဖို့ သက်သက်သာလာတွဲနေ့တဲ့ ဘဲတွေရဲ့ လက္ခဏာ (၅) ချက် ခုခေတ်မှာ တစ်ချို့ယောက်ျားလေးတွေဟာ မိန်းကလေးတွေကို တဏှာစိတ်သက်သက်နဲ့သာ တွဲတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုယောက်ျားလေးတွေဟာ တကယ်ကို ယုတ်ညံ့ပြီး အောက်တန်းကျသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလူမျိုးတွေကို ပတ်သက်မိနေတဲ့ မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ အမြန်ဆုံး နောက်လှည့်သင့်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် […]
“နောက်လာမယ့် ( ၅ ) နှစ်မှာလဲ သူများလက်အောက်မှာ မင်း အလုပ် လုပ်နေအုံးမလား?”
“နောက်လာမယ့် ( ၅ ) နှစ်မှာလဲ သူများလက်အောက်မှာ မင်း အလုပ် လုပ်နေအုံးမလား?” တစ်နေ့ ၁၀၀၀ စု ၊ ၅ နှစ်ပြည့်ရင် သင့်လက်ထဲမှာ ၁၈ သိန်းပိုင်ဆိုင်နေပါပြီး ၊ ၁၈သိန်းနဲ့ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး ကောင်းကောင်းတစ်ခုခု ထောင်နိုင်ပြီ …။ တစ်နေ့ […]